पुरानो भन्दा हजार गुणा बढी ख’तरना’क नयाँ को’रोना विश्व भरि फैलिदै , यसको गुण, लक्षणहरू यस्ता छन् ! – Sandesh Press
December 27, 2020 339
एजेन्सी, १२ पुस । युरोपका थुप्रै देशले कोरोनाभाइरसको अत्यधिक संक्रामक नयाँ प्रकार पाइएको पुष्टि गरेका छन् । भाइरसको याे प्रकारकाे पहिचान सबैभन्दा पहिले बेलायतमा भएको थियो । उक्त नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण युरोपेली अन्य देशहरुमा पनि देखिन थालेको हाे ।
जापानले नेपाललगायतका मुलुकहरुबाट आउने विदेशी नागरिकहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । जापानमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ प्रकार (भेरियन्ट) भेटिएसँगै सोमबारबाट लागू हुने गरी जापानले विदेशी नागरिकलाई मुलुक प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
जापानको विदेशमन्त्रालयका अनुसार अहिले लगाइएको प्रतिबन्ध विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा लागू हुनेछ । यो प्रतिबन्ध जनवरीको अन्तिमसम्म कायम रहनेछ ।
जापानको स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार जापानी नागरिक तथा जपानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरुले भने जापानमा आउन पाउनेछन् । तर, उनीहरुले १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । शनिबार जापानको टोकियोमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्टका दुई संक्रमित फेला परेका थिए । उनीहरु बेलायत भ्रमणबाट फर्किएका थिए । यसअघि शुक्रबार पनि बेलायतबाट आएका पाँच जनामा नयाँ भेरियन्टको संक्रमण देखिएको थियो ।
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट सबैभन्दा पहिला बेलायतमा देखिएको थियो । बेलायतमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिएसँगै विश्वका ४० भन्दा धेरै मुलुकहरुले बेलायतमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् ।
Prevराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेर के भनिन् सपना रोका मगरले
Nextनेपालमा भित्रियो नयाँ भाइरस, लकडाउन गर्ने तयारी
डा. गोविन्द केसी कोरोना संक्रमण मुक्त